मालपोत र नागरिकता दिने अधिकार पनि गाउँपालिकालाई नै दिनु पर्याे...
बुधवार, चैत्र ६, २०७५ १२:५२:४६
तत्काल जनताले राहतको महशुस गरेका छन् र गराएको छु।
मगलवार, जेठ २९, २०७५ न्यूजमिसाइल
काठमाडौ । वि.सं. २०२८ साल असोज ६ गते बुबा बल बहादुर थापा र आमा कृष्ण माया थापाको कोखबाट साविकको रुपाटार ८ हाल ताप्ली गाँउपालिका वडा नं. ५ मा उद्धव सिंह थापाको जन्म भएको हो ।
शिक्षा विषयमा विएड गरेका उद्धवसिंह थापा हाल उदयपुरको ताप्ली गाँउपालिकाका अध्यक्ष अथवा स्थानीय सरकार प्रमुख हुन्। थापाले वि.सं.२०४६ सालमा प्रवेशिका परिक्षा दिए पश्चात २०४६ सालकै जनआन्दोलनबाटै राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका हुन्।
२०४६ सालमा नेकपा एमाले निकट मानिने विद्यार्थी संगठन अनेरास्विवियुमा आवद्ध भए । त्यसैक्रममा २०४९ सालमा नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे । वि‍स‍ २०५० सालमा एमाले रुपाटारको गाउँ पार्टी सचिव हुँदै भातृ संठगन प्रजातान्त्रिक युवा संघको जिल्ला सदस्य ०५२ सालमा भए।
त्यसपछि लामो समय एमालेका विभिन्न भातृ संगठनमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेपछि २०६४ सालमा नेकपा एमाले उदयपुरको जिल्ला पार्टी सदस्य भए। गएको २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उदयपुरको ताप्ली गाँउपालिकामा थापा अध्यक्षको उम्मेदवार बने।
नभन्दै प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई २३ मतले हराउँदै थापा निर्वाचित बने । ताप्ली गाँउपालिकाको स्थानीय सरकार प्रमुख बने। तिनै स्थानीय सरकार प्रमुख उद्धब सिंह थापासँग ताप्ली गाँउपालिकाको विकास निर्माण, समस्या र अनि भावी रणनीतिक विषयमा न्यूजमिसाइल डटकमसँगको संक्षिप्त सम्बाद :–
ताप्ली गाउँपालिकाका जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति पाइराखेका छन् त ?
पार्टीले गरेको घोषणा पत्र र मैले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धता पत्रकै आधारमा चुनाव जितेको हुँ। त्यसैको आधारमा स्थानीय सरकारको प्रत्याभुती जनतालाई दिइरहेको छु । मैले पार्टी र मेरो प्रतिवद्धता पत्रमा जुन कुराको प्रतिबद्धता गरेको थिए, त्यसैको आधारमा अघि बढिरहेको छु। तर, निर्वाचित भएर आएपछि कार्यान्वयन तहमा कठिनाई आएका छन् ।
अहिले अपठ्याराबीचमा पनि जनताको सेवा गरिरहेको छु। ताप्ली गाँउपालिकामा खानेपानी, सडक, विजुली, स्थास्थ्यचौकी जस्ता समस्या थिए। यस्ता कुरामा विशेष गरेर लागि परेको छु। ति योजनाहरु पूरा गर्न ठोस योजनाहरु ल्याएका छु। तत्काल जनताले राहतको महशुस गरेका छन्। गराएको छु।
तपाईको प्रतिवद्धता पत्र अनुरुप राहतको प्रत्याभूति दिलाउँनु सक्नु भएको छ कि छैन ?
ठ्याक्कै हामीले, यो ८/९ महिनाको बीचमा रिजल्ट देखाउन सकेका छैनौ । केही कुरा देखिन थालेका छन्। जुन खानेपानी र सडकमा हो। ५ वर्ष भित्र घोषणा पत्र पूरा हुन्छ । तर, १०० मा १०० प्रतिशत नभनौ ७५ प्रतिशत पूरा हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
प्रतिवद्धता पत्र बमोजिम ५ वर्षभित्रमा पूरा गर्न नसकिने योजनाहरु के के हुन त ?
यसमा ताप्ली गाँउपालिकाको मुहार फेर्ने कुरा हो । जुन जसरी भनेका थियौ, त्यसरी पूरा गर्न सकिदैन । खानी उत्खन्ननका कुरा राखेका थियौ। त्यहाँ भएका विभिन्न किसिमका खानीहरुको अन्वेशषण गरी उत्खनन् गर्दै उद्योगको रुपमा विकास गर्ने भनेका थियौ। त्यो ५ वर्ष भित्र पूरा गर्ने सम्भावना देखेको छैन । गाउपालिकाबाट मात्र सम्भव पनि छैन ।
प्रदेश, केन्द्र सरकार वा अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा मात्र यस्ता योजना पूरा हुने रहेछन्। अर्को सदरमुकाम गाईघाट वा कटारी बजारदेखि ताप्ली गाउँपालिकासम्म २ लेनको सडक भनेका थियौ। त्यो पनि पूरा गर्न सकिएला जस्तो लागेको छैन। ठूला विकास निर्माणको आयोजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारको विना पूरा गर्न नसकिने रहेछ।
तपाईलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले कसो गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त ?
गाउँपालिकाले सक्ने योजनाहरु क्रमबद्ध रुपमा गरिरहेका छौ । ठूला आयोजनाहरुको लिष्ट बनाएका छौ। ती आयोजनाहरु केन्द्र र प्रदेश सरकारमा लैजाने तयारी गरिसकेका छौ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको प्याकेजमा लगेर क्रमिक रुपमा गरिदिए हुथ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयसम्म लिष्ट पठाएका छौ । संसद र मन्त्रीसम्मै भेट्ने काम गरिरहेको छु। अव कतिको प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग पाउँछु । त्यो भोलिका दिनमा हेर्दै जानु पर्नेछ ।
अहिले ताप्ली गाँउपालिकाको अवस्था कस्तो छ ? समस्याहरु के के छन् त बताइदिनु होस् न ?
ताप्ली गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा विकट मानिन्छन् । सडकहरु हिउँदमा मात्र चल्ने र वर्खायाममा बन्द हुने गर्दछन्। अर्को सञ्चारको पनि त्यस्तै छ। टेलिफोन टावरको पनि छैन । जहाँ पायो त्यही मोवाईल लाग्दैन । गाउँपालिकामा विद्युतीय सेवा दिन सकेका छैनौ। स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएको हाईड्रो पावरले काम गरिरहेका छन् ।
कार्यालय सञ्चालनमा पनि विद्युतको अभाव छ । जनता पनि सोलार टुकीको भरमा छन् । यो ठूलो समस्या हो। यसलाई समाधान गर्दा ताप्लीको आधा काम सकिन्छ भन्दा पनि हुन्छ ।
यी यावत् समस्याहरुको समाधान गर्न कस्तो योजना बनाउनु भएको छ त ?
हामीले गुरु योजना बनाएका छौ । ताप्ली गाउँपालिकाको एकीकृत विकास निर्माणको गुरु योजना बनाएर अघि बढेका छौ। त्यही गुरु योजना अनुसार प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौ । अर्को कुरा नागरिकता र मालपोतको पनि समस्या छ। जुन सेवा लिन कटारी नगरपालिका धाउनु पर्छ।
नागरिकता र मालपोतको समस्या कसरी हुन गयो त ?
गाउँमा सिंहदरवार आयो भन्दै हल्ला गरियो । जनताका मुख्य समस्या नागरिकता लिन र जग्गा पास सम्बन्धी हो । त्यही सेवा दिन सकेका छैनौ। हामीले मात्र होईन, देशैभरीका स्थानीय सरकार प्रमुखले दिन सकेका छैनन् ।
गाउँमा सिंहदरवार दिने हो भने, नागरिकता र मालपोत कार्यालयको सेवा दिने गरी केन्द्र सरकारले मापदण्ड तोक्नु पर्यो । त्यही सेवा दिन सकेनौ भने हामीप्रति जनताको विश्वास घट्छ।
स्थानीय तहबाट नागरिकता र मालपोतको सेवा छिट्टै दिनु प¥यो । संविधानमा चाँही दिने छ तर व्यवहारमा चाँही कार्यान्वयन हुन नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ । जनताको सेवा गर्ने कार्यालय पनि मालपोत र नागरिकता दिने नै हुदो रहेछ। त्यसैले तत्काल रुपमा जग्गा पास गर्ने मालपोत कार्यालय र नागरिकता दिने प्रशासन कार्यालयको समेत अधिकार गाउंपालिकालाई दिनु पर्छ ।
तपाईको बुझाइमा नीतिगत र व्यवहारिक समस्या के के हुन् त ?
ताप्लीमा सुशासन कायम गर्न नै समस्या देखेको छु । हामी चाहन्छौ, जनप्रतिनिधि आएपनि कर्मचारीबाट छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रवाह होस। तर, कर्मचारीले त्यसको ठिक उल्टो काम गरिरहेका हुन्छन । २० वर्ष कर्मचारीले मनमौजि ढंगले स्थानीय निकाय चलाएका थिए। हामीले भनेका कुरा हुबहु रुपमा लागू हुने अवस्था छैन । हामी एउटा सोचेर जान्छौ, कर्मचारीले अर्कौ गरिदिन्छन्।
प्रदेश र केन्द्र सरकारकातर्फबाट यी समस्याका सामधानहरु के के हुन सक्ला ?
हरेक कामहरु ऐनलाई टेकेर गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले संविधान अनुसार जुन ऐनहरु बनाउनु पर्नेछ। त्यो बनाइएको छैन। केही ऐनहरु प्रदेश र केन्द्रको हेरेर हामीले बनाएका छौ । त्यसैको आधारमा चलिरहेका छौ । मुख्य कुरा प्रदेश केन्द्रले बनाउनु पर्ने जुन ऐन छ, त्यो पहिला बनाउनु प¥यो । अर्को समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छ । शिक्षा क्षेत्र ताप्लीको भद्रगोल छ ? ताप्लीको ठूलो समस्या शिक्षा क्षेत्रको हो।
ताप्ली गाउँपालिकामा विद्यालय र शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
हिजोका दिनमा स्विकृत दिएका विद्यालयहरु आज बन्द भएका छन् । ति विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा पनि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाइएको छ । जसलाई समेट्न शिक्षा ऐन बनाउन सकेका छैनौ ।
नियमावली र कार्यविधि बनाएर काम गर्न बाध्य छौ। जसले तनाव बनाएका छ। शिक्षक दरवबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज गर्न सकेका छैनौ । कसरी मर्ज गर्ने भनेर ऐन बनाउन खोजिरहेका छौ। तर, बनाउन सकेका छैनौ। शिक्षकको अवस्था नाजुक छ । विद्यालयमा विद्यार्थी अनुसार शिक्षक छैनन्।
स्थायी र राहतका शिक्षक नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा केन्द्रित छन् । कोही शिक्षक संगठनको बलमा आएका छन्, भने कोही विभिन्न वहाना बनाएर सुविधा सम्पन्न विद्यालय केन्द्रित भएका छन् । मैले पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मार्फत कुरा उठाएको छु।
प्रकाशित मिति: मगलवार, जेठ २९, २०७५, ०९:०६:००